Fahad Yaasiin oo kulamo hoose la leh Madax sare kahor magacaabista RW | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya - Warar hoose oo Keydmedia Online heshay ayaa sheegaya in Fahad Yaasiin, Taliyaha NISA uu kulamo kawado Muqdisho xili ay soo dhawdahay magacaabista Ra'iisul Wasaaraha cusub, oo la hadal-hayo inuu noqon doono shaqsi siyaasadda ku cusub.
Fahad ayaa la kulmay si qarsoodi ah Mas'uuliyiinta Madasha Xisbiyada Qaran, oo ay ugu horeeyaan Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh, kadib markii ay soo dhaweeyay heshiiskii doorashadda lagu gaarey Shirkii Dhuusamareeb, oo aan ka qeybgalin Puntland iyo Jubaland.
Taliyaha NISA waa ninka ay mindida daabka u haya talada dalka, oo go'aannada u meeriya Farmaajo, waxaana uu galaan-gal ku leeyahay magacaabis kasta oo dowladda sameyso, isagoo hadda raadinaya Ra'iisul Wasaare ololaha doorashadda Madaxweynaha maamula.
Mudadii 30-ka maalmood ee dastuuruka uu dhigayo in Madaxweynaha Ra'iisul Wasaare ku magacaabo waxaa ka hartay 4 maalin, iyadoo aan wali Villa Soomaaliya ku dhawaaqin qofka bedelayo Xasan Cali Khayre, oo 25-kii July xilka laga qaadey.
Kama marna dowladda Qatar go'aanka Farmaajo, waxaana uga mas'uul ah oo dalka u fadhiya Fahad Yaasiin, oo lagu eedeeyay inuu rabo Soomaaliya in lagu xukumo fekerka xag-jirnimada, maadaama uu horey uga tirsanaa Maxkamadihii Islaamiga ee la riday 2007.
Comments Topics: fahad yaasiin farmaajo nisa xasan sheekh
News 26 April 2022 11:46
News 21 April 2022 11:31